सभापति देउवाले पार्टीलाई धरापमा पारेको आरोप -
सभापति देउवाले पार्टीलाई धरापमा पारेको आरोप
२०७६, १३ पुष आईतवार १३:३९ December 29, 2019 clickonLeaveaComment on सभापति देउवाले पार्टीलाई धरापमा पारेको आरोप
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका तीन शीर्ष नेताले केन्द्रीय कार्यसमितिले शुक्रबार गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सभापतिले पार्टीलाई धरापमा पारेको आरोप लगाएका छन ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा नगएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको पौडेल समूहले शनिबार महाराजगन्जस्थित महामन्त्री डा. शशांक कोइरलाको निवासमा जम्मा भएका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाको आलोचना गरे ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका र विधान मिचेर गरिएको विभाग गठन निर्णय नमान्ने चेतावनी पनि दिए । नेता पौडेलले भने, “पार्टीलाई धरापमा पारियो, हामीसँग जति भए पनि समय थियो । २०७७ मंसिर ४ र ५ गतेतिर महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, तर २०७७ को पल्ला छेउमा लगेर महाधिवेशनको मिति तोकियो । यो नै डरलाग्दो कुरा हो ।”
यसैगरी, महामन्त्री डा. कोइरालाले पनि सभापति देउवाको निर्णय कदमको विरोध गरे । कांग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि बढे मात्रै जनताले मुलुक सञ्चालनको पालो दिने छन् भन्दै ‘यदि गुट र उपगुट बनाउने हो भने जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन् भने । उनले सभापति देउवासँग छलफल भैरहेको बेलामा बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुन ठीक भएन भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।
महामन्त्री कोइरालाले सभापति देउवाको निर्णयले कांग्रेसको अस्तित्व खतरामा पार्ने काम भएको आरोप पनि लगाए । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले अन्तिम समयमा म्याद थपौँ भन्ने कुरा ठीक नभएको भन्दै सभापति देउवाको कदमको विरोध गरे । बेला बेलामा सभापति देउवाप्रति कडा भनाइ राख्दै आएका सिंहले कार्यसमितिले गरेको निर्णय ‘लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक कदम’ भएको टिप्पणी गरे ।
अमेरिकामा सन् २०१९ मा अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै हत्या
नयाँ गीत ‘तिमि मै हराए’ सार्वजनिक
बेलायतमा गएको २४ घन्टामा थप ५६१४ जनामा भाईरसबाट संक्रमित भेटियो, हालको लकडाउन ३ साता अझै लम्ब्याउने निर्णय
२०७७, २६ बैशाख शुक्रबार ००:२९ May 8, 2020 clickon
२०७७, ५ श्रावण सोमबार ०९:४८ July 20, 2020 clickon
विहीबार सार्वजनिक विदा छैन :गृह मन्त्रालय
२०७६, २६ मंसिर बिहीबार १०:१९ December 12, 2019 clickon